Samsung Tablet Recovery - Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Samsung Tablet r
Waa in aad aqbasho xaqiiqada ah in aad ma ka hortagi kartid khasaaro xogta wax alla wixii. Taasi lagu sheegay, marka aad isticmaalayso kiniinka Samsung, waxaad la kulmi kartaa xaalado meesha macluumaadkaaga shakhsiyeed uu tirtiray oo aad bilowdo sugaya siyaabo inuu ka soo kabsado dib xogta aad. Tan iyo markii ay jirto maya "Recycle Bin" in Samsung kiniiniyada socda ee Android madal, geeddi-socodka soo kabashada xogta ma aha mid fudud iyo mid sahlan sida ay tahay in nidaamka qalliinka lagu rakibay kombuyuutar.
A sababo dhowr suurto gal ka dambeeya khasaaro xogta sida mid noqon kara:
• Shil Data XIL - yaabaa inaad durkiyey files muhiim ah ka Samsung kiniin kac ku fikiraya in ay ahayd wax aan muhiim ahayn.
• Factory celi - Waxaa laga yaabaa inaad bilownay ee warshad keddibna in sidoo kale ku qoysay oo iska xog muhiim ah aad.
• Muhiimadda dareemo - Waxaa laga yaabaa inaad qabto si ula kac saaro xogta ka fiirsaneysa inay u muhiim ahayn laakiin ay waayadan dambe ogaaday in uu ahaa mid waxtar leh.
• Macluumaadka ku saaray Qaar kale - Waxaad ku wareejisay laga yaabaa in aad kaniini qof kale (caruurta aad tusaale ahaan) kuwaas oo laga yaabo in laga saaro xogta isagoo ka Jaahil ah.
Tan iyo markii aad ma ka hortagi kartid khasaaro xogta iyo ma jirto habka sahlan inuu ka soo kabsado faylasha lumay, waa in aad ku tiirsan ah software-saddexaad si ay kuu caawiyaan.
Mid ka mid ah ugu wanaagsan (oo ay u badan tahay ee la heli karo oo kaliya) codsiyada inuu ka soo kabsado xogta lumay ka qalabka Android waxaa Wondershare Dr.Fone for Android. Version Trial Wondershare Dr.Fone for Android ee lagala soo bixi karaa lacag la'aan ah ka eeg xiriirka hoose la siiyey. Si kastaba ha ahaatee, si looga faa'iideysto qaababka ay ka buuxa, waa in aad
Pre-loogau Isticmaalka Wondershare Dr.Fone
• Waa in aad haysataa debugging USB karti on kiniin Samsung. In sidaa la yeelo:
o Tag Settings> About qalab.
o Laga Murayaad saxda ah, si joogta ah ka jaftaa tirada Dhis ilaa aad soo bandhigay fariin ku leh Adigu hadda waxaad tahay sameeysa ama wax la mid ah.
o Laga Murayaad bidix, fursadaha Developer tuubada.
o Laga Murayaad saxda ah, si uu u hubiyo ka jaftaa checkbox ka USB debugging joogo iyagoo hoos yaala qaybta DEBUGGING ah.
• Waa in aad haysataa Windows ama Mac PC ah. (A Windows PC waxaa halkan loo isticmaalo bandhig.)
• Your kiniin Samsung waa in lagugu xiro PC ka via cable USB in geeyey oo ay la socdaan qalabka.
Digniinaha: Sida ugu dhakhsaha badan waxaad ogaatay in xogta aad la tirtiray, waa in aad joojiso isticmaalka qalab UGU DHAQSIYAHA BADAN in ay ka fogaadaan wax kasta oo waxyeello dheeraad ah si ay xogta lumay (oo waxay dhici kartaa haddii aad sii kaydiyo faylasha kale), iyo sidoo kale in la sameeyo nidaamka dib u soo kabashada xogta sahlan oo degdeg ah.
Ka dib kolkii oo dhan ka hor shuruudo iyo si buuxda fahamka digniin yiri, waxaad bilaabi kartaa geeddi-socodka soo kabsaday faylasha tirtiray ka kiniinkii Samsung. Si ay sidaa u sameeyaan, waa in aad Raac tallaabooyinka hoose ku siiyey;
Tallaabada 1. Isku kiniinkii Samsung in kombiyuutarka
First of dhan, si toos ah u xirmaan kiniinkii Samsung in kombiyuutarka la cable USB ah. Markaas ordi Wondershare Dr.Fone for Android on your computer, oo waxaad heli doontaa suuqa kala muhiimsan ee sida soo socota.
Tallaabada 2. sahlo debugging USB on kiniin Samsung
Next, waxaad u baahan tahay in ay awood u debugging USB on kiniin Samsung. Habka si ay awood debugging USB waa ka duwan sida ay versions Android OS. Waxaa jira saddex siyaabood oo aad doorato u.
Fiiro gaar ah: Haddii aad kaniini Samsung ayaa karti debugging USB, waxa ay si toos ah kugu hagi doona tallaabada xigta. Haddii aan, waxaad riixi kartaa "? Next furay ..." ee geeska hoose ee xaq u dhaqaaqo.
Tallaabada 3. San tirtiray fariimaha, xiriirada, sawiro iyo video on your kiniin Samsung
Marka aad halkan u joognaa, guji "bilow" si ay u falanqeeyaan kiniinkii Samsung. Ka hor inta aan sidaa yeelno, hubi in batteriga qalabka aad ka badan tahay 20%, taas oo aad ka xaqiijin doonaa falanqaynta qalab guul iyo iskaan.
Ka dib markii la falanqeeyo qalab aad, Barnaamijka ay sii wadi doonto in ay iskaan xogta laga badiyay. Isla mar ahaantaa, arji - Codsiga Superuser, arbushin doonaa shaashadda aad Samsung kiniin ah ee. Waxaad u baahan tahay riix "ogolow" in aynu geedi socodka dhaqaaqo. Markaas riix "Start" ee suuqa kala barnaamijka ee hoos ku qoran.
Tallaabada 4. Kulanka Xiisaha Leh ceshan SMS, xiriirada, sawiro iyo video ka kiniin Samsung
Barnaamijka ayaa iskaan doonaa kiniin Samsung in muddo ah. Ka dib markii in, aad ku eegaan kartaa fariimaha, xiriirada iyo sawiro laga helay qalab aad. Iyaga Riix si aad u hubiso in si faahfaahsan. Dooro kuwa aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Maxay yihiin Samsung Alwaaxdii waxaana inta badan loo isticmaalaa?
• sawirka faraha qaada lacagaha Easy - Waxa aad isticmaali kartaa adiga oo kiniin scan Samsung oo sugee aqoonsigaaga ku salaysan ee aad faraha si ay u sameeyaan lacagta online.
• Maamulka Android casriga fog - Iyadoo app saxda ah, waxa aad maamuli kartaa casriga ah aad Android fog isticmaalaya kiniin Samsung.
• Helitaanka PC fog - Iyadoo app saxda ah, waxaad heli kartaa Windows PC fog isticmaalaya kiniin Samsung.
• La ciyaar ciyaaraha - Waxaad ciyaari karo kulan on kiniin Samsung.
• Watch oo Record Videos - Waxaad sidoo kale yeelan karaan waayo-aragnimo madadaalo fiican ee aad kaniini Samsung.
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Xogta laga HTC 8X / 8 jir
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Samsung Tablet